သုတေသနလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်မဆိုဆွေးနွေးမှုအတိတ်, သုတေသီများသိပ္ပံပညာ၏နာမ၌အဓမ္မအမှုတို့ကိုပြုမိပါပြီ, ထိုဝန်ခံရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဆုံးရွားလှ၏တ Tuskegee ဆစ်ဖလစ်လေ့လာမှုခဲ့သည်။ 1932 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု (PHS) မှသုတေသီများကရောဂါ၏သက်ရောက်မှုကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့လေ့လာမှုမှာဆစ်ဖလစ်နှင့်အတူကူးစက် 400 ခန့်အနက်ရောင်ယောက်ျားစာရင်းသွင်း။ ဤသူတို့သညျ Tuskegee, အဘိဓါန် Alabama ပတ်လည်ဧရိယာကနေစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အစကတည်းကမှသည်လေ့လာမှုကို non-ကုထုံးရှိ၏ ကရုံအနက်ရောင်ယောက်ျားအတွက်ရောဂါ၏သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုလေ့လာမှု-သူတို့က "မကောင်းတဲ့အသှေးကို" ၏လေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ကတညျးသူတို့ဆစ်ဖလစ်ဟာသေစေနိုင်သောရောဂါဖြစ်ပါသည်ပင်သော်လည်းအယူမှားနှင့်ထိရောက်မှုကုသမှုကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ကြကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. လှည့်ဖြားခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတိုးတက်အဖြစ်, ဆစ်ဖလစ်ဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံနှင့်ထိရောက်သောကုသမှုဖွံ့ဖြိုးပြီး, ဒါပေမယ့်သုတေသီတက်ကြွစွာတခြားနေရာကုသရတဲ့အထဲကသင်တန်းသားများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကြားဝင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့တပ်မတော်နေ့သို့ဝင်ခဲ့အမျိုးသားတွေခံရကြပြီမယ်လို့ကုသမှုတားဆီးနိုင်ရန်အတွက်လေ့လာမှုမှာလူအပေါင်းတို့သည်အသုတေသနအဖွဲ့လုံခြုံမူကြမ်းကိုရွှေ့ဆိုင်းဒုတိယကမ္ဘာစစ​​်အတွင်းဥပမာဘို့။ သုတေသီများသင်တန်းသားများကိုလှည့်ဖြားသူတို့နှင့် 40 နှစ်ကြာဂရုစိုက်ငွငျးပယျမှဆက်လက်ပြောကြားသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကို 40 နှစ်ကြာ deathwatch ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Tuskegee ဆစ်ဖလစ်လေ့လာမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့်အချိန်ကိုအမေရိကန်တောင်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဘုံခဲ့ကြောင်းအစွန်းရောက်မညီမျှမှုတစ်ခုနောက်ခံဆန့်ကျင်ရာအရပျကိုယူ။ သို့သော်၎င်း၏ 40 နှစ်သမိုင်းကျော်, လေ့လာမှုအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်နှစ်မျိုးလုံးသုတေသီများများစွာ, ပါဝင်ပတ်သက်။ ထိုအတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်သုတေသီများအပြင်ပိုများသောဆေးပညာစာပေထုတ်ဝေလေ့လာမှု၏ 15 အစီရင်ခံစာများတစ်ဖတ်ရ (Heller 1972) ။ နှစ်လယ်ပိုင်း 1960-အကြောင်းခုနှစ်တွင်ရောဘတ် B​​uxtun အမည်ရှိလေ့လာမှုစတင်-30 နှစ်ကြာ PHS န်ထမ်းကသူကိုယ်ကျင့်တရားဒေါသထွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောလေ့လာမှု, အဆုံးသတ်ဖို့ PHS အတွင်းတွန်းလာခဲ့သည်။ Buxtun မှတုန့်ပြန်ခုနှစ်တွင် 1969 အတွက် PHS လေ့လာမှုတစ်ခုပြီးပြည့်စုံကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်ကိုလုပ်ဖို့ panel ကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ အလွန်တရာခြင်း, ကျင့်ဝတ်ပြန်လည်သုံးသပ် panel ကသုတေသီတွေကကူးစက်ခံရတဲ့ယောက်ျားကနေကုသမပြောဘဲဆက်လက်သင့်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အစဉ်းစားချင်အတွင်း panel ကိုတယောက်အဖွဲ့ဝင်ပင်မှတ်ချက်ချ: "သင်ဤကဲ့သို့သောအခြားလေ့လာချက်များဘယ်တော့မှ; "ကအားသာချက်ယူ (Brandt 1978) ။ အများအားဖြင့်ဆရာဝန်များကတက်လုပ်ခဲ့သည့်အဆိုပါအားလုံးအဖြူ panel က, အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်အချို့ကိုပုံစံကိုဝယ်ယူသင့်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပြု၏။ သို့သော်ထို panel ကိုသူတို့အသက်အရွယ်နှင့်ပညာရေးနိမ့်အဆင့်သဘောတူချက်ပေးအမျိုးသားတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမမှီအုပ်စိုး၏။ အဆိုပါ panel ကသုတေသီဒေသခံဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိများမှ "အငှားသဘောတူချက်" ခံယူကြောင်း, ထို့ကွောငျ့, အကြံပြုခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ပင်တစ်ဦးတစ်ဦးအပြည့်အဝကျင့်ဝတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်, စောင့်ရှောက်မှု၏နှိမ်ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ နောက်ဆုံးတော့ရောဘတ် B​​uxtun သတင်းထောက်တစ်ဦးမှဇာတ်လမ်း ယူ. , 1972 ခုနှစ်တွင်ဂျင်း Heller ကမ္ဘာကိုလေ့လာမှုထိတွေ့ကြောင်းသတင်းစာဆောင်းပါးတစ်ခုစီးရီးရေးသားခဲ့သည်။ ကိုယ်ကသာလေ့လာမှုနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်စောင့်ရှောက်မှုအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သောလူတို့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ကွောငျးကျယ်ပြန့်လူထုဒေါသပြီးနောက်ခဲ့သည်။
စားပွဲတင် 6.4: ကနေအဆင်ပြေအောင်အ Tuskegee ဆစ်ဖလစ်လေ့လာမှု၏တစိတ်တပိုင်းအချိန်မျဉ်းတစ်ကြောင်း, Jones (2011) ။
1932 ဆစ်ဖလစ်နှင့်အတူခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 400 ယောက်ျားလေ့လာမှုအတွက်စာရင်းသွင်းကြသည်; သူတို့သုတေသန၏သဘောသဘာဝ၏အကြောင်းကြားကြသည်မဟုတ်
1937-38 PHS ဧရိယာမှမိုဘိုင်းကုသယူနစ်ပို့ပေးပေမယ့်ကုသမှုကိုလေ့လာမှုမှာလူတို့သညျအဘို့အတားဖြစ်ပါတယ်
1942-43 PHS ဆေးကုသမှုခံယူရာမှသူတို့ကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ​​်အဘို့ရေးဆွဲခံရမှလူတို့ကာကွယ်တားဆီးဖို့ intervenes
1950 penicillin ဆစ်ဖလစ်များအတွက်ကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်ပါနှင့်ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်လာသည်; လူတို့သညျဆဲကုသကြသည်မဟုတ် (Brandt 1978)
1969 PHS လေ့လာမှုတစ်ခုကျင့်ဝတ်ပြန်လည်သုံးသပ် convenes; panel ကလေ့လာမှုကိုဆက်လက်ကြောင်းအကြံပြု
1972 ပတေရုသ Buxtun ဟောင်းတစ်ဦး PHS န်ထမ်း, လေ့လာမှုအကြောင်းသတင်းထောက်ကိုပြောတယ်, နှင့်စာနယ်ဇင်းဇာတ်လမ်းချိုး
1997 အမေရိကန်သမ္မတဘီလ်ကလင်တန်လူသိရှင်ကြားနှင့်တရားဝင် Tuskegee လေ့လာမှုတောင်းပန်
ဤလေ့လာမှု၏သားကောင်များမယ့် 399 ယောက်ျား, ဒါပေမယ့်လည်း၎င်းတို့၏မိသားစုများပါဝင်သည်: မှာအနည်းဆုံး 22 မယားသားသမီး 17 နှင့်ဆစ်ဖလစ်နှင့်အတူ2မြေးကုသမှု၏နှိမ်၏ရလဒ်အဖြစ်ထိုရောဂါကူးစက်ကြပေမည် (Yoon 1997) ။ ထို့ပြင်လေ့လာမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ထိခိုက်မှုကြောင့်အဆုံးသတ်ရှည်လျားပြီးနောက်ဆက်လက်။ အာဖရိကအမေရိကန်များဆေးပညာအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာခဲ့ယုံကြည်မှုကို, သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကို၏ဟန့်တားဖို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရှောင်ရှားရန် African-Americans တွေဦးဆောင်တဲ့ပါပြီစေခြင်းငှါယုံကြည်မှုတစ်ခုတိုက်စားမှုလေ့လာမှု-တရားမျှတ-လျော့နည်းသွား (Alsan and Wanamaker 2016) ။ ထို့ပွငျ, ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ 1980 နှင့် 90 တွင် HIV / AIDS ရောဂါကုသရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနှောင့်နှေး (Jones 1993, Ch. 14) ။
1974 ခုနှစ်, Tuskegee ဆစ်ဖလစ်လေ့လာမှုနှင့်သုတေသီများအားဖြင့်ဤသူသည်အခြားကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုမှတုန့်ပြန်, အမေရိကန်ကွန်ဂရက်ဇီဝဆေးပညာနှင့်အပြုအမူသုတေသနလူ့အောကျခံ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်အမျိုးသားကော်မရှင်ကဖန်တီးနှင့်လူ့ဘာသာရပ်များနှငျ့ပတျသကျသောသုတေသနအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကော်မတီတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်။ အ Belmont ညီလာခံ Center မှာတှေ့ဆုံ၏လေးနှစ်ပြီးနောက်အုပ်စု Belmont အစီရင်ခံစာ, တစ်သွယ်လျပေမယ် bioethics နှင့်သုတေသန၏နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးစိတ္တဇငြင်းခုံမှုများအပေါ်ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ကြောင်းအင်အားကြီးစာရွက်စာတမ်းကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ Belmont အစီရင်ခံစာသုံးအပိုင်းရှိတယ်။ အလေ့အကျင့်နှင့်သုတေသန-The Belmont အစီရင်ခံစာအကြားပထမဦးဆုံးအပိုင်း-နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးအတွက်၎င်း၏များပြားထွက်သတ်မှတ်။ အထူးသဖြင့်ကနေ့စဉျကုသမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုများလည်းပါဝင်သည်သည့်ယေဘုယျအသိပညာရှာကြံသောသုတေသနလုပ်ငန်းများအကြားခွဲခြားမှု, အလေ့အကျင့်သည်စောဒကတက်သည်။ နောက်ထပ်ထိုသို့ Belmont အစီရင်ခံစာ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူကိုသာသုတေသနလျှောက်ထားကြောင်းစောဒကတက်သည်။ ဒါဟာသုတေသနနှင့်လေ့ကျင့်အကြားကဒီဂုဏ်ထူးအ Belmont အစီရင်ခံစာဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်လူမှုရေးသုတေသန misfit ကြောင်းတစ်လမ်းကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ (Metcalf and Crawford 2016; boyd 2016) ။
အ Belmont အစီရင်ခံစာ၏ဒုတိယနှင့်တတိယအစိတ်အပိုင်းများ Persons များအတွက်သုံးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူ-လေးစားထွက်အိပ်လျက်, ကောင်းတဲ့အ; နှင့်တရားမ္တွ-နှင့်ဤအခြေခံမူသုတေသနလုပ်ငန်းအလေ့အကျင့်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဘယ်လောက်ကိုဖော်ပြရန်။ ဤရွေ့ကား, ငါသည်အခနျးမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့သောအခြေခံမူဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ Belmont အစီရင်ခံစာကျယ်ပြန့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သတ်မှတ်ပေမယ့်အလွယ်တကူနေ့က-to-နေ့ကလှုပ်ရှားမှုများကြီးကြပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်မယ့်စာရွက်စာတမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ - ဒါကြောင့်အမေရိကန်အစိုးရနှင့်အသိအမှတ်ပြုထားသည့်အအဖြစ်များသည့်စည်းမျဉ်း (D ကိုသူတို့ရဲ့တရားဝင် name ကိုဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းများ, အပိုင်း 46 ၏ခေါင်းစဉ် 45 Code ကိုဖြစ်ပါသည်, အပိုဒ်ခွဲတစ်ဦး) ဟုခေါ်ကြသည်ကြောင်းစည်းမျဉ်းများအစုတခုဖန်တီး (Porter and Koski 2008) ။ ဤရွေ့ကားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, သုံးသပ်အတည်ပြု, နှင့်သုတေသနကြီးကြပ်ဘို့ process ကိုဖော်ပြရန်, သူတို့ပြဋ္ဌာန်းအတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ကြသည် Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ (IRBs) ကိုစည်းမျဉ်းများဖြစ်ကြသည်။ အ Belmont အစီရင်ခံစာသဘောတူချက်နှင့်အဖြစ်များသည့်နည်းဥပဒေလိုအပ်သောရှစ်နှင့်ခြောက်လ optional ကိုစာရင်းပြုစုနေစဉ်စစ်မှန်တဲ့အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုကိုယ်စားပြုမယ်လို့ကျယ်ပြန့်သောလက္ခဏာများများအတွက်အတွေးအခေါ်အကြောင်းပြချက်ဖော်ပြထားတယ်: အ Belmont အစီရင်ခံစာနှင့်အဖြစ်များသည့်စည်းမျဉ်းများအကြားခြားနားချက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်စီအကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက်ဆွေးနွေးထားပါတယ်ဘယ်လိုထည့်သွင်းစဉ်းစား တစ်ဦးအသိပေးခွင့်ပြုချက်စာရွက်စာတမ်း၏ဒြပ်စင်။ ပညတ်တရားအားဖြင့်, ထိုအဖြစ်များသည့်နည်းဥပဒေကိုအမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့ထံမှငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအားလုံးနီးပါးသုတေသနလုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်။ ထို့ပြင်အမေရိကန်အစိုးရနှင့်ထံမှငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုခံယူကြောင်းများစွာသောအဖွဲ့အစည်းတွေပုံမှန်အားဖြင့်မခွဲခြားဘဲရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်၏, ထိုအဖွဲ့အစည်းမှာဖြစ်ပျက်အားလုံးသုတေသနလုပ်ငန်းဖို့အဖြစ်များသည့်နည်းဥပဒေသက်ဆိုင်ပါသည်။ သို့သော်ထိုအဖြစ်များသည့်နည်းဥပဒေကိုအလိုအလျောက်အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့ထံမှသုတေသနလုပ်ငန်းရန်ပုံငွေမခံမယူကြဘူးကြောင်းကုမ္ပဏီတွေကမှာလျှောက်ထားမထားဘူး။
ငါ Belmont အစီရင်ခံစာအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအဖြစ်အားလုံးနီးပါးသုတေသီများကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းများကျယ်ပြန့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုလေးစားလိုက်နာကြောင်းထင်ပေမယ့်အဖြစ်များသည့်စည်းမျဉ်းများနှင့် IRBs အတူလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်စဉ်နှင့်အတူကျယ်ပြန့်မျက်ဒေါသလည်းရှိ၏ (Schrag 2010; Schrag 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်, IRBs သူတို့ဝေဖန်ကျင့်ဝတ်ဆန့်ကျင်နေကြသည်မဟုတ်။ ယင်းအစားသူတို့ကလက်ရှိစနစ်ကတစ်ဦးသင့်လျော်သောချိန်ခွင်လျှာဒဏ်ခတ်ပါဘူးသို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့်၎င်း၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်နေကြသည်။ ပေးထားအဖြစ်ဤအခနျး, ဒါပေမဲ့, အဲဒီ IRBs ယူပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦး IRB ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်သောနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သူတို့ကိုသင်အတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ သို့သော်ငါသည်သင်တို့၏သုတေသနပြုချက်များ၏ကျင့်ဝတ်ဖို့စဉ်းစားကြသောအခါလည်းအခြေခံမူ-based ချဉ်းကပ်ယူရန်သင့်အားအားပေးလိမ့်မယ်။
ဒီနောက်ခံအလွန်ခေတ္တကျနော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ IRB ပြန်လည်သုံးသပ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို-based system ကိုရောက်လာပုံကိုအကျဉ်းချုပ်။ ယနေ့ Belmont အစီရင်ခံစာနှင့်အဖြစ်များသည့်စည်းမျဉ်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကသူတို့တစ်တွေကွဲပြားခြားနားသောခေတ်ကိုဖန်တီးခဲ့ကြခြင်းနှင့်-အတော်လေးခဲ့ကြသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းနှင့်ပြီးနောက်ဆေးပညာကျင့်ဝတ်အတွက်အထူးသဖြင့်ပြိုပျက်ရာတို့ကိုထဲမှာ, အဲဒီခေတ်များ၏ပြဿနာများကိုပညာရှိရှိ-တုံ့ပြန်ကြောင်းသတိရသင့်တယ် (Beauchamp 2011)
ကျင့်ဝတ် codes တွေကိုဖန်တီးဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များအားဖြင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအပြင်, သေးငယ်နှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအားဖြင့်လျော့နည်းကောင်းကောင်းသိအားထုတ်မှုလည်းရှိကြ၏။ တကယ်တော့ဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်သုတေသနလုပ်ငန်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးထိုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများသို့ run ဖို့ပထမဦးဆုံးသုတေသနပညာရှင်များလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်တွေမဟုတ်ကြ, သူတို့ကကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေ, ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးအတွက်အထူးသဖြင့်သုတေသီများခဲ့ကြသည်။ 1990 နှင့် 2000 ပြည့်နှစ်ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးသုတေသီများစဉ်အတွင်း botnet ကိုကျော်ယူပြီးနှင့်အားနည်းသော password များနှင့်အတူကွန်ပျူတာများထောင်ပေါင်းများစွာ၏သို့ hacking နဲ့တူသောအရာတို့ကိုပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း Ethics မေးခွန်းထုတ်စရာလေ့လာမှုအတော်များများကောက်ယူ (Bailey, Dittrich, and Kenneally 2013; Dittrich, Carpenter, and Karir 2015) ။ ဤအလေ့လာမှုများ, အမေရိကန်အစိုးရတို့-အထူးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများ (အိုင်စီတီ) နှငျ့ပတျသကျသောသုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက်လမ်းပြကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူဘောင်ရေးသားဖို့အမိမြေလုံခြုံရေး-နေသူများကဖန်တီးအပြာရောင်-ဖဲကြိုးကော်မရှင်များ၏ဦးစီးဌာနမှတုန့်ပြန်မှာပါ။ ဒီအားထုတ်မှုများ၏ရလဒ်များ Menlo အစီရင်ခံစာခဲ့ (Dittrich, Kenneally, and others 2011) ။ ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးသုတေသီများ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတိအကျလူမှုရေးသုတေသီများကကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ကြပေမဲ့, Menlo အစီရင်ခံစာလူမှုရေးသုတေသီများကများအတွက်သုံးအရေးကြီးသောသင်ခန်းစာတွေပေးစွမ်းသည်။
ပထမဦးစွာ Menlo အစီရင်ခံစာ Persons, ကောင်းတဲ့အများအတွက်သုံး Belmont အခြေခံမူ-လေးစားထပ်လောင်းအတည်ပြု, နှင့်တရားမျှတမှုနှင့်စတုတ္ထနိယာမကထပ်ပြောသည်: ဥပဒေနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်လေးစားခြင်း။ ငါသည်ဤစတုတ္ထနိယာမနှင့်မည်သို့ကြောင့်အဓိကကျအခနျး (ပုဒ်မ 6.4.4) တွင်လူမှုရေးသုတေသနလျှောက်ထားရပါမည်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဒုတိယ, Menlo အစီရင်ခံစာ၏တစ်ဦးထက်ပိုယေဘုယျအယူအဆဖို့ Belmont အစီရင်ခံစာမှ "လူ့ဘာသာရပ်များနှငျ့ပတျသကျသောသုတေသနလုပ်ငန်း" ၏ကျဉ်းချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် ကျော်လွန်. ရွှေ့ဖို့သုတေသီများအပေါ်ကိုခေါ် "လူ့-ထိခိုက်အလားအလာနှင့်အတူသုတေသနလုပ်ငန်း။ " ဟုအဆိုပါ Belmont အစီရင်ခံစာ၏အတိုင်းအတာ၏ကန့်သတ်မှုများမှာ ကောင်းစွာ Encore အားဖြင့်သရုပ်ဖော်။ Princeton နှင့်ဂျော်ဂျီယာ Tech မှမှာ IRBs Encore "လူ့ဘာသာရပ်များနှငျ့ပတျသကျသောသုတေသန," နှင့်ထို့ကြောင့်အဖြစ်များသည့်စည်းမျဉ်းအောက်မှာပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဘာသာရပ်မဟုတ်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်းအုပ်ချုပ်။ သို့သော် Encore ရှင်းလင်းစွာလူ့ထိခိုက်အလားအလာရှိပါတယ်; ၎င်း၏အများဆုံးအစွန်းရောက်မှာ Encore အလားအလာဖိနှိပ်အစိုးရများကအကျဉ်းကျခံရအပြစ်မဲ့လူကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်။ တစ်ဦးကအခြေခံမူ-based ချဉ်းကပ်သုတေသီများ IRBs ကခွင့်ပြုလျှင်ပင် ", လူ့ဘာသာရပ်များနှငျ့ပတျသကျသောသုတေသနလုပ်ငန်း" ၏ကျဉ်းမြောင်းသော, ဥပဒေရေးရာနှင့်အဓိပ္ပါယ်နောက်တွင်ဝှက်မထားသင့်ကြောင်းဆိုလို။ ယင်းအစားသူတို့က "လူ့ထိခိုက်အလားအလာနှင့်အတူသုတေသနလုပ်ငန်း" ၏တစ်ဦးထက်ပိုယေဘုယျအယူအဆချမှတ်သင့်ပြီးသူတို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစဉ်းစားရန်လူ့ထိခိုက်အလားအလာနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သုတေသနအားလုံးလက်အောက်ခံသင့်သည်။
တတိယအချက်အ Menlo အစီရင်ခံစာ Belmont အခြေခံမူလျှောက်ထားသောအခါထည့်သွင်းစဉ်းစားသောသက်ဆိုင်သူများကိုချဲ့ထွင်ရန်သုတေသနပညာရှင်များအပေါ်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ သုတေသနလုပ်ငန်းကိုပိုမိုနေ့က-to-နေ့ကလှုပ်ရှားမှုများတွင် embedded ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုအသက်သီးခြားနယ်ပယ်မှပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်အတိုင်း, ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစဉ်းစားသည် non-သင်တန်းသားများနှင့်သုတေသနရာအရပ်ကိုကြာရှိရာပတ်ဝန်းကျင်ပါဝင့်တိကျတဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းသင်တန်းသားများကိုကျော်လွန်ချဲ့ထွင်ရလိမ့်မည်။ သုတေသီများပဲသူတို့ရဲ့သင်တန်းသားများကိုကျော်လွန်အမြင်သူတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်လယ်ပြင်ကိုထပ်တိုးရန်အဘို့အတစ်နည်းခုနှစ်, Menlo အစီရင်ခံစာတောင်းဆိုထားသည်။
ဒီသမိုင်းဝင်နောကျဆကျတှဲဟာအလွန်အတိုချုပ်လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံသုတေသနဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်အဖြစ်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပေးစွမ်းသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံသုတေသနဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များစာအုပ်အရှည်ကုသမှုများအတွက်တွေ့ Emanuel et al. (2008) သို့မဟုတ် Beauchamp and Childress (2012) ။